🥇 Franchise katalọgụ
Banye ma ọ bụ debanye aha
Tinye aha maka n'efu
Dentistry na eze
Aplọ ahịa dị ọnụ ala
Chainlọ ahịa yinye
Clọ ahịa Hockey
Comic ụlọ ahịa
Ezigbo ụlọ ahịa
Ezigbo ụlọ ngwa ahịa
Getlọ ahịa ngwa ahịa
Ihe ọ Beụụ na-aba n’anya
Lọ ahịa ịchụ nta
Lọ ahịa ihe ncheta
Lọ ahịa matrasị
Lọ ahịa ngwa ngwa
Lọ ahịa nke ngwaahịa
Lọ ahịa orthopedic
Malalọ ahịa Marmalade
Obere ụlọ ahịa
Ofu ụlọ ahịa na-akwụ ụgwọ
Otlọ ahịa Esoteric
Sholọ ahịa maka confectioners
Shoplọ ahịa Ahịa
Shoplọ ahịa aka
Shoplọ ahịa akpa
Shoplọ ahịa anụ
Shoplọ ahịa anụmanụ
Shoplọ ahịa azụ
Shoplọ ahịa Commission
Shoplọ ahịa Delicatessen
Shoplọ ahịa Eco
Shoplọ ahịa efere
Shoplọ ahịa egbe
Shoplọ ahịa igwe kwụ otu ebe
Shoplọ ahịa injinị dị ọcha
Shoplọ ahịa mkpụrụ
Shoplọ ahịa ndị Japan
Shoplọ ahịa nkwakọ ngwaahịa
Shoplọ ahịa ọkụ
Shoplọ ahịa ọkụkọ
Storelọ ahịa azụ
Storelọ ahịa batrị
Storelọ ahịa eletriki
Storelọ ahịa Instagram
Storelọ ahịa kọmputa
Storelọ ahịa ngwongwo ụlọ
Storelọ ahịa ọgwụ
Storelọ ahịa ụdị
Storelọ nkwakọba ihe
Ụlọ ahịa chiiz
Yllọ ndekọ ndekọ Vinyl
Ylọ ahịa swiiti
Mkpokọta gị n'ụlọnga
Clublọ ịgba egwu agha
Egwuregwu na-edozi ahụ
Lọ akwụkwọ bọl
Nutritionlọ ahịa na-edozi ahụ
Storelọ ahịa ihe egwuregwu
Companylọ ọrụ na-ewu ụlọ
Mmezi nke ụlọ
Storelọ ahịa akụrụngwa
Ulo nkpuchi ulo
Clublọ egwuregwu ụmụaka
Ebe ụmụaka nọ
Educationallọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ụmụaka
Foodmụaka nri n'okporo ámá
Ihe okike umuaka
Lọ ahịa ụmụaka
Lọ akwụkwọ ọta akara
Lolọ elu ụmụaka
Na-arụ ọrụ maka ụmụaka
Ọrụ maka ụmụaka
Schoolslọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ ụmụaka
Studiolọ ihe nkiri ụmụaka
Studlọ nka ụmụaka
Swimmingmụaka igwu mmiri
Agencylọ ọrụ ịme ngosi uwe
Ebe omume biya
Imewe ngwongwo kemịkal akpaaka
Imewe nke yi uwe
Mmepụta brik na-agbanwe agbanwe
Mmepụta ihe ụlọ
Mmepụta nke ama egwuregwu
Mmepụta nke ígwè
Mmepụta nke ngwaahịa
Mmepụta nke ngwaahịa plastik
Mmepụta ọgwụ ụlọ
Mmiri ara ehi cheese
Nrụpụta nke akwụkwọ mposi
Ntughari ihe ntanye onwe
Storelọ ahịa dị mma
ụlọ ọrụ akwa
Educationallọ akwụkwọ agụmakwụkwọ
Schoollọ akwụkwọ n'ịntanetị
Schoollọ akwụkwọ nke mmemme
Schoollọ akwụkwọ ọkwọ ụgbọala
Botlọ egwuregwu Robotics
Clubmụ nwanyị Club
Klọb ịgba agba
Otu maka umuaka
Car ngwa ahịa ụlọ ahịa
Mgbanwe nke mmanụ
Nchekwa onwe akụkụ ụlọ ahịa
Ọrụ ụgbọ ala
Taya dabara adaba
Imezi akpụkpọ ụkwụ
Mmezi dị iche iche
Mmezi ụlọ ọrụ ọrụ
Klọb ndị njem
Akwukwo nri ụlọ ahịa
Cafe anaghị eri anụ
Colọ ahịa kọfị
Iri nri dị mma
Ndị nkịta na-ekpo ọkụ
Restaurantlọ oriri na ọ Italianụ Italianụ ndị Italy
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Arụ Armenia
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Georgụ ndị Georgia
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ
Restaurantlọ oriri na ọ Turkishụ Turkishụ ndị Turkish
Restaurantlọ oriri na ọ Vietnamụ Vietnamụ Vietnamese
-Enye gị n'ụlọnga
Agencylọ ọrụ agbamakwụkwọ
Agencylọ ọrụ Internetntanetị
Agencylọ ọrụ na-ere ahịa ụlọ
Businessgbazinye ego azụmahịa
Companylọ ọrụ na-enyefe mmadụ ego
Companylọ Ọrụ Nchịkwa
Companylọ ọrụ nyocha
Ihicha ụlọ ọrụ
Kọmputa ụlọ ọrụ
Lọ Ọrụ Insurance
Mbugharị Agencylọ Ọrụ
MMlọ ọrụ SMM
Ndị na-eji ọkụ eletrik
Ọrụ olili ozu
Clothinglọ ahịa dị n'ịntanetị na Instagram
Coatlọ ahịa ajị anụ
Storelọ ahịa akwa
Storelọ ahịa egwuregwu
Storelọ ahịa nne
Storelọ ahịa uwe nwoke
Uwe na akpụkpọ ụkwụ ụlọ ahịa
Wearlọ ahịa ọrụ
Buenos Aires nke dị na
Onye na-agba ume
Onye na-agba ịnyịnya
Igodo na-ekpo ọkụ
Ma ọ bụ st.
Mbanye anataghị ikike
Na-enye afọ ojuju
Ndị ọsụ ụzọ
Nkezi Akhtuba RP
nkume na obi
Obodo ndị dịpụrụ adịpụ Moscow
Ọdọ ọdọ mmiri oge niile
Oke Osimiri Ojii
Onye na-amụ gbasara ihe gbasara anụ ọhịa
Polar chi ọbụbọ
Successga nke ọma
Ugwu Ndị Isi
Dị otú ahụ
Ndị na-abụghị ndị ọgụ
Ochie ndị ochie
Ọdụ mmiri gbagọrọ agbagọ 2
Onye na-egwuputa ihe
Onyinye Gba ọtọ
Pickles Jiri nwayọọ
St. Petersburg Tinye na TBCITES (id, id_tbCountries, aha, id_tbLangs, sysname) ALLỌ (USA)
Enweghị ụgwọ izizi ụgwọ
Mkpokọta nchikota aha
Etinye ego chọrọ $
Obere ego ruru $ 500
Ndị dị ọnụ ala franchises n'okpuru $ 1000
Ndị ọnụ ala dị ọnụ ala ruru $ 2000
Obere ntinye ego n'okpuru $ 4000
Akwụ ụgwọ ego ruru $ 10000
Franchise nwere obere ntinye aka ruru $ 20000
Nchịkọta akụnụba ruru $ 30000
Obere ego ruru $ 40000
Franchises azụmahịa dị ọnụ ala n'okpuru $ 50000
Azụmaahịa na itinye ego ruru $ 75000
Nnukwu ego ruru $ 100,000
Isi franchise karịrị $ 100,000
Franchise ire na eze
Franchises na ngwa ngwa payback - na 1 ọnwa
Nkwụghachi ụgwọ ngwa ngwa - site na ọnwa 1 ruo ọnwa 3
Payback nke aha si 4 ọnwa 1 afọ
Oge nkwụghachi ụgwọ nke aha karịrị afọ 1
Nwere ike ịhọrọ otutu ụkpụrụ
Ikike ụmụ nwanyị
Ezigbo aha ezinụlọ
Maka obere obodo, obere obodo, obere obodo
Home aha. Nwere ike ịrụ ọrụ n'ụlọ
Nwa oge wepụ
Aha maka ụmụ anụmanụ
Uru, uru kachasị uru
Mepee ụlọ ahịa aha
Lọ ahịa na ngwaahịa dị ọnụ ala
Online aha, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Franchise site ọkọ
Aha aha n'efu
Njikere di njikere
Ogologo oge ole ka nzukọ a nọ na-arụ ọrụ
1 ruo 3 afọ
4 ruo 10 afọ
11 ruo 20 afọ
Ihe karịrị afọ 20
Onye nnochite anya
Chọọ site n'aha akara na ederede mgbasa ozi. Ị nwekwara ike ịchọ site na ndetu nke gị.
Ozi onwe m
Debanye aha ma ọ bụ banye iji ozi nkeonwe
Anaghị ele ya anya
Iji ọkacha mmasị
Lelee mgbe e mesịrị
Ọ masịghị m
E lere leta ahụ anya
E leghị leta ahụ anya
A zara akwụkwọ ozi ahụ
Anaghị aza akwụkwọ ozi ahụ
Enwere m ozi ọhụrụ
Gosi njirisi ọchụchọ niile
Mgbasa ozi achọtara: 983
USU - Universal Akaụntụ Sistemụ
Ego mbụ: 0 $
Etinye ego chọrọ: 0 $
Ọchịchị: 0 $
Nkwụghachi ụgwọ. Ọnụọgụ nke ọnwa: 1
Atiya: Mmemme, Akaụntụ
Mmemme maka ụdị azụmaahịa ọ bụla! Ọ gaghị ekwe omume azụmaahịa na-enweghị sọftụwia ịchịkwa ọrụ nke ụlọ ọrụ yana akụkụ ọrụ ya niile. Kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ dị otú a na-enwe nnukwu ọghọm n'ihi na ọ nweghị ike nyochaa adịghị ike ya ma melite ha. Njikọ na-adịghị ike nwere ike ịbụ ihe ọ bụla: ihe na-enweghị mmasị na nzukọ na-aga n'ihu ịzụta maka ire ere; ọrụ nke na-ewetaghị uru a tụrụ anya ya n'ihi mgbasa ozi ọjọọ; ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ndị arụmọrụ ha adịghị mma; na ọtụtụ ndị ọzọ. Bụrụ onye nnochite anya anyị na obodo gị ma ọ bụ obodo gị ma nweta akụkụ kacha agbaze - azụmaahịa!
Lelee nkọwa zuru ezu
Ndekọ ọnụ ọgụgụ
Ị nwere ike ịzụta ohere adịchaghị iji hụ ọnụ ọgụgụ zuru ezu
Ego mbụ: 10000 $
Etinye ego chọrọ: 20000 $
Ọchịchị: 6 %
Nkwụghachi ụgwọ. Ọnụọgụ nke ọnwa: 6
Atiya: Ihe onwunwe
Nkọwa nke franchise nke franchisor: RE / MAX LLC (RE / MAX LLC) hiwere afọ 40 gara aga na Denver, Colorado, USA ma na -arụ ọrụ ugbu a n'ihe karịrị mba 90 gburugburu ụwa. Kemgbe Jenụwarị 2014, RE / MAX abatala na Republic of Belarus. RE / MAX bụ ụlọ ama ama ama ama ama ama na ụlọ ọrụ ụlọ. Ihe karịrị ọfịs 7,000 na -arụ ọrụ n'ihe karịrị mba 90, na -ewe ihe dị ka ndị ọrụ ụlọ ala 120,000. RE / MAX Franchise RE / MAX bụ ụlọ ọrụ franchise nke ụlọ ọrụ na ngalaba ọ bụla nweere onwe ha, mana na -agbaso iwu ụlọ ọrụ niile, ọnọdụ ọrụ na imekọ ihe ọnụ, na -asọpụrụ ụkpụrụ omume na ụkpụrụ. RE / MAX na-enye ndị ọrụ franchise ya ụdị azụmaahịa dị njikere, gosipụtara na nkwado zuru oke n'oge ọrụ ya niile, na-enye onye ọ bụla nọ na netwọkụ a ohere irite uru site na iji onyonyo na akara nke ụlọ ọrụ mba ụwa.
Etinye ego chọrọ: 157000 $
Nkwụghachi ụgwọ. Ọnụọgụ nke ọnwa: 36
Atiya: Akọrọ ihicha
Nkọwa Franchise site na franchisor: Ndị na -ehicha ihe na Spanish na franchise, malitere na Madrid na 1994. Ruo taa, ụlọ ọrụ ahụ na -aga n'ihu na -akwalite echiche azụmaahịa ya na mba 23 na kọntinent ise, ma ugbu a, ọ na -ewepụta onwe ya ọrụ nke ịzụlite netwọkụ ya n'ahịa Belarus. Pressto na -akpọpụta Belarus dị ka ahịa na -ekwe nkwa maka ụdị azụmaahịa jikọtara ọnụ dịka Pressto, ebe ọrụ dị elu na -abawanye mgbe niile. N'oge mmepe nke ahịa franchise dị na Belarus, ọchịchọ maka ịsa akwa na ọrụ nhicha akọrọ na -abawanye. Ihe kpatara franchise Pressto ji bụrụ azụmaahịa azụmahịa kacha mma. Enwere ike ịpụta ụfọdụ nnukwu ihe ịga nke ọma Pressto n'ụzọ dị iche iche, site na ihe ngwọta pụrụ iche maka ụdị nhicha ọ bụla iji dozie ọtụtụ ọrụ n'otu akwa. Pressto na -enye echiche azụmaahịa ọhụrụ dabere na ihe ọhụrụ na usoro nyocha.
Etinye ego chọrọ: 8000 $
Nkwụghachi ụgwọ. Ọnụọgụ nke ọnwa: 8
Atiya: Akpaaka akụkụ, Lọ ahịa nke ngwaahịa
Ụlọ ọrụ Makey anọwo na-emepe nke ọma kemgbe ihe karịrị afọ 20, a na-ewerekwa ya nke ọma dị ka otu n'ime ndị isi na-emepụta akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ dị elu, ngwa azụmahịa na ihe ndị dị n'ime. Anyị na -enwe ekele maka ndị omenkà anyị ma jiri ha na -anya isi, n'ihi na ọ bụ ekele maka mbọ ha na -eme ka a mara akara anyị, na ngwaahịa na -achọsi ike ọ bụghị naanị na Belarus, kamakwa na mba ofesi. Otú ọ dị, nke a bụ ihe okike, n'ihi na ụlọ ọrụ anyị na -eji ndị ọkachamara nwere nkà mmụta agụmakwụkwọ ka elu. Makey Franchise "Makey" bụ onyinye pụrụ iche n'ahịa franchising nke ihe ncheta akpụkpọ anụ ejiri aka mee. - Anyị na-enye azịza dị njikere maka ịmalite azụmahịa, nke kachasị mma n'ihe gbasara itinye ego, yana ọnụego nkwụghachi ụgwọ dị mma. Makey - Anyị na -enyere gị aka ịchọta ebe kwesịrị ekwesị maka ọrịre ahịa. Anyị na -enye eserese na nhọrọ kacha mma maka ọnọdụ akụrụngwa akụrụngwa.
Ego mbụ: 4500 $
Etinye ego chọrọ: 4000 $
Atiya: Educationallọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ụmụaka, Mmepe ụmụaka
Ebe mmepe ụmụaka Lesenka bụ ụwa ọrụ ebube na akụkọ ifo, nchọpụta mbụ na ihe ọmụma maka nwa ahụ. N'ime klaasị dị na Center Development Childhood, ụmụaka na -egosi nka ha na ihe okike ha, na -eme ka ụwa mmetụta uche ha baa ọgaranya. Ihe Lesenka franchisee na-enweta maka ịkwụ ụgwọ ego: enyemaka na ịhazi ebe mmepe ụmụaka (ihe achọrọ maka ogige ahụ, atụmatụ mmeghe, ndepụta akụrụngwa, nnabata na usoro iwu na nka, ihe na uru na ọnụ ahịa belatara, nhazi ọrụ) ; atụmatụ azụmahịa maka etiti ahụ afọ abụọ; enyemaka na nhọpụta na ntule ndị ọrụ; ọzụzụ na ọzụzụ bara uru nke ndị ọrụ dabere na ebe dị adị; mmemme ọzụzụ pụrụ iche nke na -etolite uru asọmpi; nkwado na -aga n'ihu; mmemme nkwalite na ịre ahịa;
Buyzụta aha dị mfe, ihe bụ isi bụ ịhọrọ ụdị azụmaahịa dabara gị mma. Nwere ike ịzụta ihe niile ịchọrọ na aha, ebe ọ bụ, dị ka a na-achị, a na-enye gị ngọngọ niile nke ozi azụmaahịa dị mkpa ịmalite. Zụta aha bara uru n'ihi na ị nwere ike ịmalite azụmaahịa na-eweta oke uru dị ukwuu na-enweghị ahịa ahịa ọ bụla. Onye na-ere ahia na-enye gị ozi niile ịchọrọ ịmalite ịkpata ego na oge ndekọ. Naanị ịchọrọ ịzụta aha ma nwee ọ enjoyụ ahụmịhe nke ndị mmadụ guzobere ogologo oge tupu ị kpebie ịbanye azụmaahịa a. N'ezie, ikwesiri inweta ikike ga-adabara gị na ike gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnweghị ego iji mepee ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịzụta aha. N'ezie, ụlọ ọrụ ndị na-enye ohere iji nweta ikike iji chọpụta aha ndị chọrọ ịzụ ya, na mmejọ na usoro a adịkarịghị ụkọ. Ọ bụrụ na ị kpebie inweta aha, mgbe ahụ ị bụ franchise, onye zụrụ ahịa azụmaahịa a.
Nwere ike ịghọ onye ọchụnta ego ma jiri aha nke onye ọ bụla nụlarị. Also nwetakwara echiche dị njikere ma ghara ichepụta ihe ọ bụla site na weghachite kpamkpam. Na Russia, ịkọbanye aha ndị mmadụ enweela ewu ewu ogologo oge na 2021 bụ otu n'ime ụdị azụmaahịa nke yiri ka ọ na-enye ego dị mfe mgbe itinye ego. Ọ bụghị ihe niile dị mfe, agbanyeghị, ịzụta aha ka dị mfe karịa ichepụta azụmaahịa site na ncha. Izere ọnụ ahịa ịmịpụta akara ngosi, iwepu mkpa ị mepụtara ụdị ejiji na imepụta nke gị, ihe niile na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịnye ụdị azụmahịa gị O zuru ezu naanị ịzụta ihe ọmụma dị mkpa ma jiri ya mee ka ọnụego mmefu ego na-abawanye ngwa ngwa.
Yingzụta aha aha apụtaghị ịzụta ya kpamkpam. Nwere ike ịgbazite ohere iji ụdị na ngwa ọrụ niile na-eso ya nwa oge. Ọtụtụ mgbe, franchisees na-akwụ ụgwọ ego zuru oke. A ghọtara onyinye ego dị ka ohere iji otu ụdị azụmaahịa, ụdị azụmaahịa dị ugbu a, iji nweta ego. Nwere ike imechitere gị, jiri teknụzụ dị ugbu a, rie akụrụngwa enyere, ma tinye akara ụghalaahia ma ọ bụ akara. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ fọrọ nke nta ọ bụla mgbakọ na mba ọ bụla. Agbanyeghị, ị gaghị enwe ike ịzụta ikike ma kwalite ya na mpaghara gị. Ọ dị mkpa iji nlezianya na-amụ ohere nke ịme akara a na ụdị azụmaahịa na mpaghara mpaghara. Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta aha, mgbe ahụ ọ na-adịkarị mkpa ịme mgbanwe ụfọdụ na ụdị dị ugbu a.
Nke a nwere ike ịbụ mgbakwunye nke obere ntakịrị nkọwa, nkọwa, nke ejiri mara naanị mpaghara gị. Ọ na - enye ọtụtụ ndị ahịa bara ụba na enwere ike iji ụdị mmewere dịka akụkụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Ozugbo i kpebiri ịzụta ikike, ịkwesịrị ime ihe ozugbo ka ego ahụ wee kwụọ ụgwọ. Idenye aha ikike nwere ike ịbụ ụdị mgbazinye akara ụghalaahia. Dịka iwu, a na-ewepụta nkwekọrịta pụrụ iche n'etiti franchisor na franchisee. Nke a bụ usoro nke otu esi azụta aha. Contract na-eduzi nkwekọrịta ahụ na ntinye n'ọrụ ụlọ ọrụ na azụmahịa gị na-aga ugwu.
Anyị na-akwado ka ị zụta kpọmkwem aha ị masịrị gị na nke ị nwere ike iji mekọrịta ihe nke ọma, yana ị nweta nke kachasị na ego gị. Ndị franchisor na-anata ụgwọ alaeze n'aka gị maka iji akara ụghalaahịa ha ma ọ bụ etu esi mara ha. Ọzọkwa, a na-enyekarị ihe ntinye na nkwekọrịta ahụ. Ihe eji arụ ọrụ, ọzụzụ ndị ọrụ, ihe a niile so na nkwekọrịta ahụ. O zuru ezu naanị ịzụta ikike kwekọrọ na ya. Nwere ike nweta a aha na-erigbu niile nke mara aghụghọ ka gafere gị site na-ere ákwà. A na-ekwukwa usoro eji eji ngwaahịa ngwaahịa eme ihe n'otu n'otu. Ha nwere ike ịbụ ndị nweere onwe ha na ndị isi ike, ha niile dabere na ihe mgbaru ọsọ abụọ na-achụ. Onye franchise ahụ na-akwụ ụgwọ maka ikike enyere ya azụmaahịa mgbe ọ na-eji atụmatụ ahụ n'aka ya.
Nwere ike ịzụta ọ bụghị naanị ikike iji rụọ ọrụ ahụ mana yana ihe ọmụma niile, teknụzụ, na ụdị akụ dị iche iche ịchọrọ n'oge ọrụ agha.
Lọ ahịa Franchise
Lọ ahịa aha bụ ụdị ikpo okwu ebe a na-etinye onyinye dị iche iche maka alaka ụlọ ọrụ iji mepee n'obodo ma ọ bụ mba ọzọ. Dị ụlọ ahịa a nwere ike iji ndị chọrọ ịzụlite azụmaahịa ha. Ejiri ọnụnọ dị ukwuu nke onyinye dị iche iche dị na usoro ugbu a dị ka ụlọ ahịa dị otú a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na franchise, mgbe ahụ ọ bụ na ụlọ ọrụ ụdị pụrụ iche ka ị kwesịrị ịchọ ha. Ọ dị mkpa na ụlọ ahịa dị otú ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke onyinye dị mkpa, ma ọ bụghị, ọ nweghị isi na ya. Ekwesiri inye ndi nlezianya na nkowa ha nlebara anya kwesiri, ma ulo ahia a nwere ike inyere ndi choro inweta ohere imezu ahia di iche iche dika atumatu di ugbua.
Ntinye aha bụ usoro ụfọdụ ma ọ bụ usoro ihe niile dị iche iche nke onye zụrụ ahịa na-eme iji wepụta ma kwalite n'onwe ya. N'otu oge, ụlọ ọrụ na-ere aha na-enyere onwe ya aka. Ọ dị mfe iji ụlọ ahịa ebe a na-etinye ụdị ngwongwo ndị a ka ị wee nwee ike ịhọrọ nke kachasị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa ka onye na-achụ ego weghara akụnụba ego ma chọọ iji ụdị akara ama ama nke amaara ụwa niile. Onye na-etinye ego na-aga ahịa ma họrọ ngwaahịa nke kachasị ya mma. Ọ bụrụ na ụlọ ahịa dị otú ahụ nwere nkọwa zuru ezu banyere ikike, mgbe ahụ ị nwere ike ịme mkpebi ozugbo na ebe ahụ. A na-atụle ọnọdụ ndị a n'otu n'otu, ma mgbe onye zụrụ ikike zụrụ ikike naanị n'ime ụlọ ahịa ahụ, a ga-ahazi asọmpi. Nke a bụ ọnọdụ ka onye na-azụ ahịa nwee ike ịhọrọ nke kachasị mma.
Storelọ ahịa nke oge a ga-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ, ebe nke a bụ azụmahịa siri ike. Ọtụtụ ụlọ ọrụ chọrọ ịbanye n'ahịa ndị agbata obi nwere ike ịchọta n'ụlọ ahịa a. Nwere ike ịchọta aha ọ bụla masịrị gị ma ọ bụrụ na ị gaa ebe dị ka nke a. Nke a dị mma ebe ọ bụ na enyere ozi niile dị mkpa n'otu saịtị. Njikọ ọnụ nke franchise niile n'otu ikpo okwu na-aghọ ebe mbusa nke na-enye ohere ịzụta ngwaahịa ndị dabara adaba n'ihe gbasara ihe achọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ebe ndozi, mgbe ahụ ị ga-ahụ saịtị dị otú ahụ na Internetntanetị. Ọzọkwa, ka ụlọ ahịa ka mma, ka a na-enwekwu franchises. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke amụma na-enye ezigbo ohere ime nhọrọ ziri ezi.
Nkọwa zuru ezu banyere aha na-enyere gị aka ịghọta ma ọ bụrụ na ọ dabara na mmasị gị yana ma ọ ga-ekwe omume ịkwalite ya na mpaghara ụfọdụ. N'ime ụlọ ahịa, ị nwere ike iji ọtụtụ nhọrọ tụnyere. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ nke kacha mma. Ekele maka ụlọ ahịa nwere ihe ùgwù, ndị ọchụnta ego na-achọ itinye ego na akụnụba ma jiri akara ama ama ama ama wee nwee ike itinye atụmatụ ha ọsọ ọsọ na nke ọma. Ekwesịrị ịdị mfe igodo iji chọta ikike ikike. Alọ ahịa dị otú ahụ na-arụ ọrụ na Internetntanetị, na aha nke ụdị ndị ahụ etinyere na ya dabere na nkwụsi ike ya na nchekwa ya. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọdụm dị otú ahụ ga-emerịrị ihe nchekwa niile achọrọ wee nwee asambodo ndị dị mkpa. Deplọ nkwakọba ihe nke oge a kwesịrị ị na-enye ozi zuru oke mgbe niile banyere ngwaahịa ọ na-enye. Lọ ahịa aha abụghị naanị n'ihi na ọ ga-emerịrị ihe ndị a chọrọ n'ọnọdụ nke oge a.
Ekele maka ikpo okwu dị otú a, ị nwere ike ịmekọrịta ihe n'ụzọ dị irè na ndị nnọchianya nke ụdị dị iche iche. Ọbụna enwere ike ịme mkparịta ụka ma ọ bụrụ na ahaziri ụlọ ahịa aha.
Mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ahịa aha, ihe bụ isi abụghị imehie, ebe ọ bụ na ọ bụ ọrụ azụmahịa dị oke mkpa, n'ihi na onye na-etinye ego na-ahọrọ mpaghara ebe ọ ga-etinye ego ego. Storelọ ahịa aha na-enye onye ọ bụla ezigbo onyinye dị iche iche. Franchises nwere ike kachasị na-eburu n'uche nkọwapụta mpaghara. Ọtụtụ mgbe, nke a dị mkpa na nkọwa zuru ezu banyere ọnọdụ ndị onye na-ere ahịa nyere onye zụrụ ahịa ga-enwerịrị n'ime ụlọ ahịa ahụ. Measuresdị omume ndị a na-enye onye ọchụnta ego nwere ike ịchọrọ itinye aka na mkpebi ịme mkpebi ziri ezi na atụmatụ dị otú ahụ.
Ndepụta aha aha bụ ndepụta nke atụmatụ mmepe azụmaahịa ugbu a dabere na akara ama ama ama. Enwere ike iji akwụkwọ ndekọ dị otú ahụ site na onye ọchụnta ego nke chọrọ itinye ego yana ọ chọghị ịzụlite azụmaahịa site na isi n'otu oge. Katalọgụ dị mma maka onye dị otú ahụ. Edere aha ọ bụla dị n'ahịa ebe a. Ekele maka katalọgụ dị otú ahụ, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ ọkacha mmasị na niche kachasị adaba. Katalọgụ dị otú ahụ na-emekwa ka o kwe omume ịkpọtụrụ onye na-ere ngwa ngwa wee jụọ ajụjụ ndị nwere mmasị. N'ime usoro ntuziaka nke aha aha, ọ bụghị naanị onyinye niile dị mkpa ka ekwesịrị, ma nkọwa nke ụdị ngwaahịa a kwesịrị ịdị. Ekele maka nkọwa ahụ, ọ ga-ekwe omume ịme mkpebi njikwa kachasị mma ma tozuru oke. Simply nweghị ike ịme na-enweghị akwụkwọ ndekọ aha ma ọ bụrụ na onye ahịa nwere ike ịhọrọ nhọrọ kacha mma.
Kedu aha aha nwere ike ịbụ n'efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ dabere na onye nwe saịtị ahụ. N'otu oge ahụ, ndị franchisors n'onwe ha na-akwụ ụgwọ maka ohere ị ga-eziga na saịtị dị otú ahụ ma ọ bụ ngwaọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ. N'ihi aha akwukwo aha, enwere ike ịdọta ndị na-azụ ahịa ọhụrụ. A na-akpọ onye na-azụ ahịa aha aha ka ọ bụrụ franchise. Ọ na-enweta ohere ịme azụmahịa dịka atụmatụ ahụ dị, nke enyere ndị na-eri ya. Ndi franchisor meputara atumatu a, ebe ndi franchisee n’onwe ya n’eji ego nkwadebe niile, igba oru, na oru nke ihe ahia. Nke a dị mma maka ndị ahụ nwere ohere itinye ego na akụnụba mana achọghị ịmepụta ihe ọhụụ. Ha na-ewere aha zuru oke, nke dị ha mma. N'aka nke ọzọ, katalọgụ ahụ na-enyere gị aka ịme nhọrọ gị, mee mkpebi njikwa kachasị mma, ma nweta ego kachasị site na ego etinyegoro.
N'ime ndekọ aha aha, ị nwere ike ịkọwa oke nke ịkwụ ụgwọ ego zuru ezu. Nke a bụ uru nke aha, nke edobere na nke franchisor na-enweta site na franchise ahụ na ọkwa izizi. Nke a nwere ike ịbụ ihe dịka 10% nke ụgwọ mbido niile. N'otu oge, n'ime usoro ọgụgụ aha, ị nwere ike ịkọwapụta nkọwa ndị na-akọwa usoro nke mmekọrịta na ọbụna nkọwa zuru ezu. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnye akwụkwọ azụmahịa dị ka ego. Ọ bụ ihe ọ bụla karịa usoro iwu edepụtara nke ọma nke na-ekwenye na nhazi nke mmemme n'ụzọ kachasị rụọ ọrụ. Otu ọrụ ahụ ezubere maka iwulite njirimara ụlọ ọrụ, ịmalite mgbasa ozi, yana arụmọrụ ndị ọzọ metụtara mmekọrịta na ndị ahịa. Akwụkwọ a na - akpọ aha akwụkwọ ga - enyere gị aka ịnyagharị etu ị ga - esi na - emekọrịta ihe n'etiti ndị ahịa. Naanị n'ime usoro aha aha aha, ihe ndị a kwesịrị ịkọwapụta nke ọma na nke a na-enyere onye ahịa nwere ike ime mkpebi ziri ezi.
Ọ bụrụ na akwụkwọ ndekọ aha aha dị ugbu a, mgbe ahụ, ọ depụtara onyinye niile dị ugbu a yana ndị ahịa nwere ike ịchọta nke kachasị mma. Katalọgụ dị otú ahụ na-enye ohere irekwu aha ebe ọ bụ na ha niile dị na otu saịtị. A ga-ahaziri katalọgụ ahụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma. Measuresdị ndị a dị mfe igodo ma mee ka katalọgụ rụọ ọrụ nke ọma ma nwee obi ụtọ maka ụzọ ndị ahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ katalọgụ, ọ ka mma ikpokọta ya nke ọma na nke ọma. A ga-enye ndị nlebara anya dị mkpa iji hụ na ọ nweghị njehie ihe ọ bụla bilitere na nkọwa ha. N'ihi ndepụta nke aha, ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịchọta ndị na-ere ha na azụmaahịa ahụ ga-amalite ịmalite, ngalaba ọhụrụ niile ga-emepe n'obodo na mba ndị agbata obi.
A ga-enwerịrị akwụkwọ ndekọ aha aha nke ga-adaba adaba nke onye ọrụ iji nwee ike ịchọta ngwọta kacha mma. Ekele maka akwụkwọ ntuziaka aha ndị ahịa ọ bụla nwere ike ịnagide ọrụ ọ bụla dị ka akụkụ nke ịchọta ozi ga-adịrị ha mma.
A gha akwalite azụmaahịa aha n'okpuru iwu nke ndị na-ere ere nyere. A na-akpọ onye na-ere ere franchisor ma dị iche na nke ahụ maka ikike iji nweta etu esi mara ma ọ bụ ụghalaahịa, ọ na-enweta ego ụfọdụ site na ihe a na-akpọ aha. Otu ihe, n'aka nke ya, ga-akwụ ụgwọ onyinye, nke a na-ebufe maka ikike iji azụmaahịa a nyere. Ebumnuche ahụ mepụtara site na ndị nnọchianya nke franchisor, ebe ọnụ ahịa niile nke ịmalite na ịkwadebe azụmahịa ahụ sitere n'aka onye nweta ya n'onwe ya.
N'aka nke ọzọ, otu ikike bụ sistemụ arụmọrụ nke na-akọwa nke ọma usoro niile, ọnọdụ, na akụkụ niile, nke na-enye ohere ịme azụmaahịa ọfụma. N'otu oge ahụ, usoro azụmaahịa ga-agbasosi ike na arịrịọ nke franchisor. Ọ bụ mgbe ahụ ka aha ahụ na-adị irè dị ka o kwere mee, ma a na-enye azụmahịa ahụ oke nlebara anya ọ chọrọ. Ndị ọchụnta ego nwere ihe ịga nke ọma nwere ike idetuo ọrụ ndị ụkọchukwu kpamkpam, ụfọdụ n'ime ha na-emeziwanye mmelite ha. A na-atụle ọrụ ọ bụla na ọbụlagodi mgbanwe na onye na-ere ere, ebe ndị a bụ iwu.
Mgbe emechara nkwekọrịta ahụ, ọ ga-ekwe omume ịmalite azụmaahịa site na iji aha. Measuresdị omume ndị a na-enye onye na-azụ ahịa ohere inweta uru na itinye ego na ngwa ngwa n'ihi na ịkọcha aha ya abụghị naanị itinye ego nke akụnụba na ụdị dị adị, nke mepere emepe, ma nwaakwa. Businessdị azụmahịa a na-enye ohere ịrụ ọrụ nke ọma n'ọfịs, na-eburu n'uche nkọwapụta mpaghara. Oge ụfọdụ ikike anaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na arụghị ọrụ azụmaahịa na-ezighi ezi ma ọ bụ oghere gbara ya gburugburu adabaghị na nke dị n'ala nna nke ọrụ ahụ.
A na-ahụ azụmaahịa aha kwa ụbọchị n'okporo ámá nke obodo gị. O nwere ike ịbụ kafe ọ bụla, ụlọ ahịa, ebe a na-akpụ isi, ma ọ bụ nzukọ ọ bụla. Ọbụna McDonald na KFC bụ franchise ndị nwere oke ọkwa ama ama. A na-edebanye aha niile na ịme azụmaahịa na-eso atụmatụ ahụ na nkwekọrịta ahụ. Emere nkwekọrịta ahụ iji dozie esemokwu niile ka onye ọ bụla wee mara ikike na ọrụ ha. Ọ bụrụ na ị ga-agba ahịa azụmaahịa, ọ bara uru ịhọrọ ụdị azụmaahịa kachasị mma. Ọzọkwa, iburu n'uche ihe ndị akọwapụtara maka ihe omume na mpaghara gị dị oke mkpa. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịtụle ire ere pancakes nke McDonald's na Russia. Ohere nke oge a ị na-azụ ahịa azụmaahịa na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere na-enweghị njedebe nke ihe ịga nke ọma nye ndị ahụ nwere ego ego na-enweghị ego ma chọọ itinye ego ha nke ọma.
Typedị azụmahịa a dị irè karịa ịkwalite akara site na ncha. Otu onye ọchụnta ego ejirilarịrị ịzụlite ụdị ihe atụ a ma kesaa ahụmịhe ya maka pasent ụfọdụ. Nke a dị mma ebe ọ bụ na azụmaahịa aha na-enye gị ohere magburu onwe ya ịghara ichepụta ihe ọhụụ, kama iji nhọrọ ịga nke ọma dị adị. Azụmaahịa dị otú ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na arụ ọrụ niile na-arụ ọrụ dịka usoro iwu edepụtara na nkwekọrịta ahụ si dị. Azụmahịa aha ga-etolite n'ike n'ike ma ọ bụrụ na ekwenye mgbanwe na onye na-ere ya, nke ga-eburu n'uche nkọwapụta mpaghara.
Maka ndị chọrọ ịmalite azụmaahịa aha, saịtị pụrụ iche, katalọgụ, ma ọ bụ ụlọ ahịa dị mkpa, ebe a na-enye onyinye niile dị ugbu a n'ahịa. Site n'enyemaka nke katalọgụ dị otú ahụ, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ kachasị mma. Na-arụ ọrụ na azụmaahịa aha, na-ahọrọ ntụzịaka kachasị dabara adaba nke ị ga-esi merie ọrụ ahụ. N'ihi ahia aha naanị, ọtụtụ ndị amụbaala isi obodo ha. Mgbe itinye ego na azụmaahịa aha, ị nwere ike inwe olile anya inweta ego dị elu. Nloghachi na ntinye ego a na-adịkarị elu. Nke a bụ ihe na - eme ka ụdị ọkwa azụmaahịa a dị elu. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ itinye ego ha na ihe atụ nke nwalere ma nụchaa kemgbe ọtụtụ afọ.
Soro ndị enyi gị ma ọ bụ chekwaa adreesị nke ibe a maka onwe gị
Nchịkwa saịtị: info@FranchiseForEveryone.com
Youtube Ọwa akụkọ
Ọ bụrụ n’ịhụ typo, iji mezie ya, jiri òké họrọ ederede na -ezighi ezi wee pịa igodo Tinye
Ọ bụrụ n'ịhụ typo, pịa ebe a iji mezie ya